Ralf Rangnick oo ku sii dhaweynaya Man United inay ku guuleysato saxiixa xiddig si weyn loo wada xiiseynayo – Gool FM
Ralf Rangnick oo ku sii dhaweynaya Man United inay ku guuleysato saxiixa xiddig si weyn loo wada xiiseynayo
Dajiye December 25, 2021
(Manchester) 25 Dis 2021. Manchester United ayaa rajaynaysa inay ku guuleysato dadaalka ay ugu jirto saxiixa xiddiga da’ada yar ee reer Germany iyo kooxda Bayer Leverkusen ee Florian Wirtz.
Sida lagu sheegay warbixin uu daabacay wargeyska Daily Star ee dalka England maamulka Manchester United ayaa aaminsan in la saxiixashada tababare Ralf Rangnick ay ka dhigeyso inay ku xooganaato dagaalka loogu jiro saxiixa 18 jirka reer Germany.
Rajada wanaagsan uu maamulka kooxda Manchester United ka qabo saxiixa Florian Wirtz ayaa waxay salka ku heysaa qiimaha wayn ee uu tababare Ralf Rangnick ku leeyahay kubbada cagta Germany iyo ixtiraamka uu ku dhex haysto ciyaaraha Jarmalka.
Manchester United ayaa raacdada loogu jiro saxiixa Florian Wirtz waxay loolan adag kalakulmi doontaa kooxaha Bayern Munich,Real Madrid,Chelsea iyo Liverpool.
Florian Wirtz wuxuu ku fiican yahay ka ciyaarista booska khadka dhexe ee weerarka iyo garabka, waxaana loo dalacsiiyay kooxda koowaad ee Bayer Leverkusen sanadkii 2020, wixii intaa ka dambeeyay wuxuu u saftay 68 kulan tartamada oo dhan ah isagoo u dhaliyay 17 gool, wuxuuna saaxiibadiis ka caawiyay 19 gool kale.
Barcelona oo xiiseyneysa xiddig muhiim ah ee ka tirsan Man City, mana ahan Ferran Torres
Kulammada maalinta Boxing Day ee Premier League oo maanta illaa iyo caawa la ciyaari doono & Saddex kulan oo baaqday